Dɛn na Kristofo bɛtumi ayɛ ma wɔn ho akɔ so ate? | Adesua
Ná Yesu Dɔ Nnipa
Yɛbɛtumi Akura Yɛn Ahotew Mu
Fa Mpae a Yesu Kyerɛe no Mu Nsɛm Bɔ Wo Bra—Ɔfã 1
Fa Mpae a Yesu Kyerɛe no Mu Nsɛm Bɔ Wo Bra—Ɔfã 2
KENKAN WƆ Afrikaans Cakchiquel (Western) Cambodian Dangme English Ewe French Ga Garifuna Greenlandic Hmong (White) Iban Italian Kimbundu Kwangali Kwanyama Laotian Lingala Maltese Mam Mazatec (Huautla) Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndonga Ngabere Nzema Portuguese Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Sepedi Sesotho (Lesotho) Spanish Swati Tahitian Tlapanec Tojolabal Totonac Tsonga Tswana Twi Umbundu Venda Xhosa Zulu
Ɔwɛn-Aban—Nea Adesua Nsɛm Wom | June 2015
“Monhohoro mo nsa, . . . na monte mo akomam.”—YAKOBO 4:8.
SƐN NA KYERƐWSƐM A ƐDIDI SO YI BOA YƐN MA YƐKURA AHOTEW MU?
Yakobo 1:14, 15
1. Dɛn na nnipa bebree susu sɛ asɛm nni ho?
NNIPA a wɔte wiase yi mu dodow no ara bra asɛe. Sɛ yɛbɛma ho nhwɛso a, nnipa pii susu sɛ ɛnyɛ bɔne sɛ ɔbarima ne ɔbarima anaa ɔbaa ne ɔbaa bɛda. Afei nso, wɔsusu sɛ asɛm biara nni ho sɛ ɔbarima ne ɔbaa a wɔnyɛ awarefo bɛda. Nna mu ɔbrasɛe abu so wɔ sini, nwoma, nnwom, ne nneɛma ho dawurubɔ mu. (Dwom 12:8) Nanso Yehowa bɛtumi aboa yɛn ma yɛabɔ ɔbra a ɛsɔ n’ani. Yɛbɛtumi akura yɛn ahotew mu anaa yɛabɔ ɔbra pa wɔ wiase a ɔbrasɛe abu so wom yi mu.—Kenkan 1 Tesalonikafoɔ 4:3-5.
2, 3. (a) Adɛn nti na ɛsɛ sɛ yɛyi yɛn adwene fi akɔnnɔ bɔne so? (b) Dɛn na yɛbɛsusu ho wɔ adesua yi mu?
2 Sɛ yɛpɛ sɛ yɛyɛ nea ɛsɔ Yehowa ani a, ɛnneɛ ɛsɛ sɛ yɛtwe yɛn ho fi biribiara a ɔkyi ho. Nanso esiane sɛ yɛnyɛ pɛ nti, ɔbrasɛe bɛtumi atwetwe yɛn sɛnea nam a ɛhyɛ darewa ano twetwe apataa no. Sɛ ɔbrasɛe ho adwene ba yɛn tirim a, ɛsɛ sɛ yɛyi yɛn adwene fi so ntɛm ara. Sɛ yɛanyɛ saa a, akɔnnɔ bɔne no ano bɛyɛ den araa ma sɛ bɔne bɛto yɛn a, anhwɛ a yɛbɛyɛ. Saa pɛpɛɛpɛ na Bible ka. Ɛka sɛ: “Sɛ akɔnnɔ no nyinsɛn a, ɛwo bɔne.”—Kenkan Yakobo 1:14, 15.
3 Akɔnnɔ bɔne bɛtumi anyin wɔ yɛn koma mu. Ɛno nti na sɛ yɛnya biribi ho akɔnnɔ a, ɛsɛ sɛ yɛhwɛ yie paa no. Sɛ yɛpo akɔnnɔ bɔne a, yɛbɛtwe yɛn ho afi aguamammɔ ho, na ɛho nsunsuanso bɔne remma yɛn so. (Galatifoɔ 5:16) Yɛbɛsusu nneɛma mmiɛnsa a ɛbɛboa yɛn ma yɛako atia akɔnnɔ bɔne ho wɔ adesua yi mu: Yehowa adamfofa, afotu a ɛwɔ Onyankopɔn Asɛm mu, ne mmoa a yɛbɛnya afi Kristofo a wɔn ho akokwaw hɔ.
4. Adɛn nti na ɛho hia sɛ yɛbɛn Yehowa?
4 Bible ka kyerɛ wɔn a wɔpɛ sɛ ‘wɔbɛn Onyankopɔn’ no sɛ: “Monhohoro mo nsa” na “monte mo akomam.” (Yakobo 4:8) Sɛ Yehowa yɛ yɛn Adamfo paa a, ɛnde ɛsɛ sɛ yɛma yɛn nneyɛe ne yɛn nsusuiɛ nyinaa sɔ n’ani. Sɛ yɛn adwenem te fann a, ɛnneɛ yɛn komam nso bɛte. (Dwom 24:3, 4; 51:6; Filipifoɔ 4:8) Yehowa nim sɛ yɛnyɛ pɛ, enti yɛbɛtumi adwendwene ɔbrasɛe ho. Nanso, esiane sɛ yɛmpɛ sɛ yɛma Yehowa di awerɛhoɔ nti, yɛbɔ mmɔden biara sɛ yɛbɛyi yɛn adwene afi nsusuiɛ bɔne so. (Genesis 6:5, 6) Yɛyɛ nea yɛbɛtumi biara sɛnea ɛbɛyɛ a yɛbɛkɔ so adwendwene nneɛma a ɛho te ho.
5, 6. Ɔkwan bɛn so na mpaebɔ bɛtumi aboa yɛn ma yɛadi akɔnnɔ bɔne so?
5 Sɛ yɛkɔ so bɔ mpae a, Yehowa bɛboa yɛn ma yɛayi nsusuiɛ bɔne afi yɛn adwenem. Ɔma yɛn ne honhom kronkron sɛnea ɛbɛyɛ a yɛbɛnya akokoduru ama yɛn ho akɔ so atew. Sɛ yɛrebɔ mpae a, yɛbɛtumi aka akyerɛ Yehowa sɛ yɛpɛ sɛ yɛdwendwene nneɛma a ɛsɔ n’ani ho. (Dwom 19:14) Ɛsɛ sɛ yɛde ahobrɛase srɛ Yehowa sɛ ɔnhwɛ sɛ nsusuiɛ bɔne bi wɔ yɛn komam a ɛbɛtumi ama yɛayɛ bɔne anaa. (Dwom 139:23, 24) Sɛ mpo ɛyɛ den ma wo sɛ wobɛtwe wo ho afi ɔbrasɛe ho na woayɛ nea ɛtene a, kɔ so srɛ Yehowa ma ɔmmoa wo.—Mateo 6:13.
6 Ansa na yɛresua Yehowa ho ade no, ebia na yɛtaa yɛ nneɛma bi a Yehowa ani nnye ho, na ebi mpo a yɛda so ara repere sɛ yɛbɛdi akɔnnɔ bɔne a ɛte saa so. Nanso Yehowa bɛtumi aboa yɛn ma yɛasesa na yɛayɛ nea ɛsɔ n’ani. Sɛ yɛhwɛ Ɔhene Dawid sɛɛ a, bere a ɔne Bat-Seba sɛee aware no, ɔnuu ne ho, na ɔsrɛɛ Yehowa sɛ ɔmma no “akoma a emu teɛ,” na ɔmmoa no mma ɔntie no. (Dwom 51:10, 12) Enti sɛ yɛda so ara repere sɛ yɛbɛdi akɔnnɔ bɔne bi a ɛyɛ den paa sɛ yɛbɛgyae so a, Yehowa bɛtumi aboa yɛn ma yɛanya ɔpɛ a emu yɛ den sɛ yɛbɛtie no na yɛayɛ nea ɛtene. Yehowa bɛtumi aboa ma yɛadi yɛn nsusuiɛ bɔne so.—Dwom 119:133.
Sɛ akɔnnɔ bɔne ba yɛn komam a, ɛsɛ sɛ yɛyi fi yɛn mu ntɛm ara (Hwɛ nkyekyɛm 6)
“MONYƐ ASƐM NO YƐFOƆ”
7. Ɛbɛyɛ dɛn na Onyankopɔn Asɛm aboa yɛn ma yɛayi nsusuiɛ bɔne afi yɛn adwenem?
7 Yehowa nam n’Asɛm Bible so bɛtumi abua yɛn mpaebɔ. Onyankopɔn nyansa a ɛho te no wɔ Bible mu. (Yakobo 3:17) Sɛ yɛkenkan Bible da biara a, yɛde nneɛma a ɛho te hyɛ yɛn adwenem. (Dwom 19:7, 11; 119:9, 11) Bio, kɔkɔbɔ pii ne nneɛma bi a ebinom yɛe ho nsɛm wɔ Bible mu a ɛboa yɛn ma yɛyi yɛn adwene fi nsusuiɛ bɔne ne akɔnnɔ bɔne so.
8, 9. (a) Ɛyɛɛ dɛn na aberante bi ne ɔbaa huhuni bi bɔɔ aguaman? (b) Tebea ahorow bɛn na asɛm a ɛwɔ Mmebusɛm ti 7 no bɛboa yɛn ma yɛatwe yɛn ho afi ho?
8 Onyankopɔn Asɛm bɔ yɛn kɔkɔ wɔ Mmebusɛm 5:8 sɛ, yɛntwe yɛn ho mfi ɔbrasɛe ho. Mmebusɛm ti 7 ma yɛhu aberante bi a ɔkɔtuu mpase anadwo kɔfaa baabi a ɛbɛn ɔbaa huhuni bi mpɔtam. Ná ɔbaa no gyina mpɔtam hɔ baabi a “ɔfira adwamantam,” anaa wasiesie ne ho sɛ tuutuuni. Ɔbaa no kɔɔ aberante no nkyɛn, ɔyeree no, ɔfee n’ano, na ɔkaa nsɛm ma ɛkanyan akɔnnɔ bɔne wɔ ne mu. Aberante no anhyɛ n’akɔnnɔ so ma enti ɔne ɔbaa no bɔɔ aguaman. Ɛwom sɛ wanyɛ n’adwene sɛ ɔrekɔyɛ bɔne deɛ, nanso ɔyɛe. Wei kɔfaa ɔhaw kɛse baa ne so. Sɛ ɔmaa n’ani daa hɔ huu sɛ ɛde no bɛkɔ asiane mu a, anka ɔremmɛn baabi a ɔbaa no wɔ koraa!—Mmebusɛm 7:6-27.
9 Sɛ yɛanhwɛ yie a, yɛbɛtumi asisi gyinae bɔne a ɛde yɛn bɛkɔ asiane mu te sɛ saa aberante no. Nhwɛso bi ni. Ɛdu anadwo a, wɔtaa yi sini a ɔbrasɛe wom wɔ TV dwumadibea ahorow bi. Enti ɛbɛyɛ asiane kɛse sɛ yɛbɛkyinkyin TV so ahwɛ nea ɛwɔ dwumadibea ahorow bi kɛkɛ. Saa ara nso na asiane wom sɛ yɛbɛbuebue Intanɛt dwumadibea ahorow a yɛnnim nea ɛwɔ hɔ. Afei ɛnsɛ sɛ yɛne nkurɔfo a wɔn bra asɛe bɔ nkɔmmɔ wɔ Intanɛt so anaa yɛkɔ Wɛbsaet a wɔbɔ ɔbrasɛe ho dawuru anaa ɛbɛma yɛahwɛ ponografi anaa aguamansɛm. Sɛ yɛkɔ mmeae a ɛte saa a, nneɛma a yɛhwɛ no bɛtumi akanyan akɔnnɔ bɔne wɔ yɛn mu, na ɛbɛtumi ama yɛayɛ Yehowa so asoɔden.
10. Adɛn nti na asiane wom sɛ ɔbaa de ne ho bɛhyehyɛ mmarima anaa ɔbarima de ne ho bɛhyehyɛ mmaa? (Hwɛ mfoni a ɛwɔ adesua yi mfiase no.)
10 Bible san kyerɛ yɛn sɛnea ɛsɛ sɛ mmaa ne mmarima bɔ. (Kenkan 1 Timoteo 5:2.) Kristoni mfa n’adwene nsi obi so nnya ne ho akɔnnɔ, gye sɛ ɔyɛ ne kunu anaa ne yere anaa obi a ɔpɛ sɛ ɔware no. Kristoni barima mfa ne ho nhyehyɛ mmaa, na saa ara nso na Kristoni baa mfa ne ho nhyehyɛ mmarima. Ebia ebinom bɛnya adwene sɛ, sɛ wɔkyinkyim wɔn ho dannan wɔn ho anaa wɔpopa wɔn ani akyi kyerɛ mmarima anaa mmaa a, asɛm biara nni ho efisɛ wɔmfaa wɔn ho ntwitwii obiara. Nanso sɛ nnipa mmienu de wɔn ho hyehyɛ wɔn ho a, anhwɛ a wɔbɛnya adwemmɔne, na ɛbɛtumi ama wɔabɔ aguaman. Ebi asi pɛn, na ɛbɛtumi asan asi bio.
11. Dɛn na yɛsua fi Yosef asɛm no mu?
11 Yosef yɛɛ biribi a yɛbɛtumi asuasua. Potifar yere yɛɛ sɛ ɔbɛdaadaa Yosef ma ɔne no ada. Yosef ampene, nanso ɔbaa no kɔɔ so de asɛm no guan ne ho. Daa na ɔka kyerɛ Yosef sɛ ‘ɔne no nhyehyɛ hɔ,’ anaa ɔntena ne ho. (Genesis 39:7, 8, 10) Bible ho ɔbenfo bi kyerɛkyerɛɛ mu sɛ na Potifar yere no hwɛ kwan sɛ sɛ ɛka ɔne Yosef nkutoo a, Yosef ani bɛgye ne ho. Nanso, na Yosef asi ne bo sɛ ɔremma kwan mma ɔbaa no mfa ne ho nhyehyɛ no da, na wanyɛ saa nso. Enti bere a ɔbaa no sɔɔ Yosef atade mu sɛ ɔne no mmɛda no, ntɛm ara na Yosef ‘gyee ne ho gyaa n’atadeɛ no maa no na ɔdwane firii adi.’—Genesis 39:12.
12. Yɛyɛ dɛn hu sɛ nea yɛde yɛn ani hwɛ bɛtumi adaadaa yɛn koma?
12 Yesu bɔɔ yɛn kɔkɔ sɛ nea yɛde yɛn ani hwɛ bɛtumi adaadaa yɛn koma na akanyan nna ho akɔnnɔ bɔne wɔ yɛn mu. Yesu kaa sɛ: “Obiara a ɔbɛkɔ so ahwɛ ɔbaa anya akɔnnɔ ama no no asɛe awareɛ dada n’akoma mu.” (Mateo 5:28) Asɛm a ɛte saa too Ɔhene Dawid. “Ɔfiri ɛdan no atifi hɔ hunuu sɛ ɔbaa bi redware,” nanso wanyi n’ani, na ɔkɔɔ so dwenee ɔbaa no ho. (2 Samuel 11:2) Ɛwom sɛ na ɔbaa no yɛ ɔbarima bi yere deɛ, nanso ɔnyaa ne ho akɔnnɔ, na ɔne no dae sɛee aware.
13. Adɛn nti na ɛsɛ sɛ yɛne yɛn ani yɛ “apam,” na yɛbɛyɛ dɛn ayɛ saa?
13 Sɛ yɛpɛ sɛ yɛyi nsusuiɛ bɔne fi yɛn tirim a, ɛsɛ sɛ yɛsuasua Hiob. Ɔkaa sɛ: “Apam na me ne m’ani ayɛ.” (Hiob 31:1, 7, 9) Sɛnea Hiob yɛe no, yɛbɛtumi asi yɛn adwene pi sɛ yɛrenhwɛ obi nnya ne ho akɔnnɔ bɔne. Sɛ yɛhu ɔbarima ne ɔbaa nna ho mfoni wɔ kɔmputa so, mfoni a wɔde bɔ nneɛma ho dawuru, nsɛmma nwoma mu, anaa baabi foforo biara a, ɛsɛ sɛ yɛyi yɛn ani ntɛm ara.
14. Dɛn na ɛsɛ sɛ yɛyɛ na ama yɛakura ahotew mu?
14 Sɛ wohwɛ nea yɛasusu ho yi a, ebia wobɛhu sɛ ɛhia sɛ woyere wo ho paa na woatumi adi akɔnnɔ bɔne so. Sɛ wohu sɛ ɛsɛ sɛ woyɛ nsakrae bi a, yɛ no ntɛm ara! Sɛ wotie Yehowa asɛm a, wobɛtumi atwe wo ho afi aguamammɔ ho na woakura ahotew mu.—Kenkan Yakobo 1:21-25.
‘FRƐ ASAFO NO MU MPANIMFOƆ’
15. Sɛ ɛyɛ den ma yɛn sɛ yɛbɛdi akɔnnɔ bɔne so a, adɛn nti na ɛhia sɛ yɛhwehwɛ mmoa?
15 Sɛ ɛyɛ den ma wo sɛ wobɛdi akɔnnɔ bɔne so a, ka ho asɛm kyerɛ asafo no muni bi a ɔde bere tenten asom Yehowa a ɔbɛtumi de Onyankopɔn Asɛm atu wo fo. Ebia ɛrenyɛ mmerɛw sɛ wobɛka wo kokoam asɛm akyerɛ afoforo, nanso ɛho hia sɛ wohwehwɛ mmoa. (Mmebusɛm 18:1; Hebrifoɔ 3:12, 13) Kristofo a wɔn ho akokwaw bɛtumi aboa ma woahu nsakrae a ɛhia sɛ woyɛ. Afei yɛ saa nsakrae no na ama Yehowa akɔ so ayɛ w’Adamfo.
16, 17. (a) Dɛn na mpanyimfo no bɛtumi ayɛ de aboa wɔn a ɛyɛ den ma wɔn sɛ wɔbɛdi akɔnnɔ bɔne so no? Ma nhwɛso. (b) Adɛn nti na ɛhia sɛ wɔn a wɔhwɛ ponografi anaa aguamansɛm no hwehwɛ mmoa ntɛm ara?
16 Wɔn a wɔfata paa sɛ wɔboa yɛn ne yɛn asafo mu mpanyimfo. (Kenkan Yakobo 5:13-15.) Ná ɛyɛ den ma aberante bi a ɔwɔ Brazil sɛ ɔbɛdi akɔnnɔ bɔne so. Ɛhaw no mfe pii. Ɔka sɛ: “Ná menim sɛ nneɛma a medwendwene ho no nsɔ Yehowa ani, nanso na ɛyɛ me aniwu sɛ mɛka ho asɛm akyerɛ afoforo.” Asafo mu panyin bi huu sɛ aberante no hia mmoa, na ɔhyɛɛ no nkuran sɛ ɔnka nkyerɛ mpanyimfo na wɔmmoa no. Aberante no kaa sɛ: “Sɛnea mpanyimfo no yii wɔn yam boaa me no yɛɛ me nwonwa, ná menhwɛ kwan koraa sɛ wɔbɛnya me ho abotare na wɔate me ase saa. Wɔtɔɔ wɔn bo ase tiee m’asɛm. Wɔkenkan Bible kyerɛɛ me ma menyaa awerɛhyem sɛ Yehowa dɔ me, na wɔne me bɔɔ mpae. Ɛma ɛyɛɛ mmerɛw maa me sɛ mɛgye Bible mu afotu a wɔde maa me no atom.” Bere a aberante no siesiee ɔne Yehowa ntam akyi no, ɔkaa sɛ: “Afei na mahu sɛ mfaso wɔ so sɛ yɛbɛhwehwɛ mmoa sen sɛ yɛn nkutoo bɛsoa yɛn adesoa.”
17 Sɛ wotaa hwɛ ponografi anaa aguamansɛm a, ɛsɛ sɛ wohwehwɛ mmoa ntɛm ara. Sɛ woma ɛkyɛ a, ɛrenyɛ den koraa sɛ wobɛbɔ aguaman. Sɛ wobɔ aguaman a, ɛbɛhaw afoforo, na ɛbɛma nkurɔfo abɔ Yehowa dimmɔne. Nkurɔfo pii ahwehwɛ mmoa afi mpanyimfo no hɔ, na wɔatie afotu a wɔde maa wɔn no, sɛnea ɛbɛyɛ a wɔbɛyɛ nea ɛsɔ Yehowa ani na wɔakɔ so atena Kristofo asafo no mu.—Dwom 141:5; Hebrifoɔ 12:5, 6; Yakobo 1:15.
SI WO BO SƐ WOBƐMA WO HO ATE!
18. Dɛn na woasi wo bo sɛ wobɛyɛ?
18 Nnipa a wɔwɔ Satan wiase no mu abrabɔ sɛe araa na ɛresɛe. Nanso, Yehowa asomfo bɔ mmɔden sɛ wɔbɛma wɔn adwenem ate fann. Yehowa ani gye saa Kristofo yi ho paa. Momma yɛnkɔ so mmɛn Yehowa, na yɛntie n’afotu a ɔnam n’Asɛm no ne Kristofo asafo no so de ma yɛn no. Sɛ yɛyɛ saa a, yɛn ani bɛgye, na yɛanya ahonim pa. (Dwom 119:5, 6) Daakye sɛ wɔyi Satan fi hɔ a, yɛbɛtena ase daa wɔ Onyankopɔn wiase foforo a ɔbrasɛe biara nnim mu.
NSƐM BI MU NKYERƐKYERƐMU
Sɛnea yɛbɛma yɛn ho ate: Ɛne sɛ yɛbɛyi nsusuiɛ bɔne afi yɛn adwenem na yɛremma nna ho akɔnnɔ bɔne nni yɛn so
ƆWƐN-ABAN—NEA ADESUA NSƐM WOM June 2015